'I-Hustlers' LiBali loLwaphulo-mthetho laseMelika elingexesha - Iimuvi
'I-Hustlers' LiBali loLwaphulo-mthetho laseMelika elingexesha
Kukho umgca osuka Hustlers ukuba uJennifer Lopez uye waphakamisa kwaye waphinda wabuyisela ifilimu ukhenketho lwemidiya, intwana efanelekileyo yobusela. Kwifilimu (kwaye ngoku kubomi bokwenyani), umlingiswa kaLopez, uRamona, (kwaye ngoku uLopez ngokwakhe) wahlula ihlabathi libe ziintlobo ezimbini zabantu, abanezinto kunye nabangenazo, esebenzisa intsingiselo yendawo yakhe yokusebenza. Yiklabhu yonke, uLopez uxelelwe i-Associated Press ngexesha Toronto International Film Festival, apho Hustlers iqaliwe. Unabantu abaphosa imali kunye nabantu abadlalayo. Uyasibona isizathu sokuba u-Lopez engene kwesi sicatshulwa njengesandi esivakalayo-sicacile, sihlakaniphile, kwaye siyagxeka, siphinda kabini njengengxelo yethisisi kunye ne-quip.
Hustlers ijolise kubantu abagulayo kukwenza umdaniso. I-Destiny (uConstance Wu), i-waitress eyedwa evela eQueens, yenza abahlobo bakaRamona, umdanisi onobubele nolawulayo kwiklabhu ye-strip yaseManhattan. Ekuqaleni, isibini sanelisekile kukunyuka kunye nokusila iibros zaseWall Street. Kungumsebenzi odinisayo, osoloko ungenambulelo, kodwa bayakonwabela ubusuku obunesiphithiphithi kunye nabahlobo babo abadanisayo (edlalwa, phakathi kwabanye, uCardi B noLizzo) kwaye, komnye umboniso ophucukileyo, nosaziwayo ophosa iidola ngamaxesha athile. Emva kokuba imeko yezemali ka-2008 ihlasele, nangona kunjalo, imali iyeka ukungena kwiklabhu ngokulula, kwaye i-Destiny iyasokola njengomama ongatshatanga kunye nomgcini kamakhulu wakhe owalupheleyo. Kwaye ke isicwangciso siyilwe ukugcina i-Destiny kunye nerenti kaRamona ihlawulwe, abaxhomekeke kubo bekhuselekile, kunye nomyili weengxowa. Kunye neMercedes kaKeke Palmer kunye noLili Reinhart ka-Annabelle, abasetyhini baqala ukutyibilikisa abathengi babo i-concoction yasekhaya ye-memory-erasing ketamine kunye ne-MDMA kwaye emva koko baqhube amakhadi abo okuthenga ngetyala xa nje amadoda engena kumnyama owonwabileyo, efumana amanqaku amancinci namakhulu njengoko amanqaku abo elele. icime. Ukubheja kwabo: Ukufika kwabo, amadoda anokuqiniseka ukuba ayisebenzisile imali, kwaye ngokuqinisekileyo anokuba neentloni ukubiza amapolisa. Njengazo zonke ii-flicks zokunyuka nokuwa, ubuqhetseba busebenza de buyeke. Izindlu zomoya, ubuhlobo, kunye nenkululeko ziphumelele kwaye zilahlekile.
'KwiGems angasikwanga' kunye 'neBali loMtshato,' iimuvi ezimbini eziZodwa zaseNew York
‘Iimela Ziphandle’ Yinto yokuphosa umva kunye neNgaphandle
'I-Joker' ifumana i-Buzz enzulu. Ngaba Ufanele Ukuthabathe Ngokunzulu?
Indawo yokuqala ka-Lopez kwifilimu, i-striptease kwi-Fiona Apple's Criminal, ngumboniso wobukhazikhazi obunqabileyo apho azimisa khona njengendlovukazi ye-club magnetic kangangokuba ndothuswa kukuba abantu kwithiyetha yam khange bafikelele kwimidlalo yabo yeqonga. izipaji ukujula $20s kwiscreen. (Ubemfanele!) Ukusebenza kukaLopez kolu landelelwano kuthoba ngabom kwaye kusondele ngendlela ebonisa umlawuli wesenzo sokulinganisa ithoni ekhohlisayo u-Lorene Scafaria ukhupha ekudaleni iklabhu ye-raunchy strip apho abadanisi bezifundo zabo kunezinto zayo. I-striptease ngumboniso owenzelwe amadoda aneempondo, ewe-kwaye intle kakhulu, inomtsalane-kodwa. Hustlers endaweni yoko yandisa isiphumo enaso kwi-Destiny. Ubona amandla uRamona ayalela ngokuhamba kwihlabathi elakhelwe ukukholisa amadoda, kwaye uyashukunyiswa lelo gunya, litsalwa kukuqonda kukaRamona kwindawo yakhe. URamona, xa ekhwela eqongeni, ufana nomlo ongena eringini, uxelele uScafaria. Iifilimu ezintsha , ephawula ukuba wafumana inkuthazo kwiifilim ezifana UMlo kwaye Inkunzi enomsindo xa ucinga ngomlinganiswa. Kuyo yonke imbewu elandelayo, uRamona usebuqaqawulini bakhe njengoko ejikeleza ipali, echanekile kwaye egqibelele okomzuzwana, kwaye iScafaria yenza ukuba lo mzuzu uzive ngathi ngumdlalo wembaleki. Kuvakala ngathi ngumboniso bhanyabhanya wokulwa, utsho. Zikhola eluhlaza. Basebenzisa imizimba yabo de bangabi sasebenzisa imizimba yabo ukwenza imali, kwaye bendifuna ukwenza olo nxibelelwano.
Njengeesaga zolwaphulo-mthetho zikaMartin Scorsese Goodfellas kwaye Ingcuka yaseWall Street , Hustlers isekelwe kwibali lokwenyani, kwaye lisebenza kakuhle njengeqhekeza lezo filimu. Kukho umntu wangaphandle ofakwe kwi-glitzy, ulwaphulo-mthetho lwendlela yokuphila evuyisayo enokubonelela; kukho imvakalelo yosapho yokuba izangqa zabaphuli-mthetho zinokubonelela ngemiphefumlo elahlekileyo; kukho imiboniso ye-giddy, uburheletya be-narcotic, kunye nesenzo sesithathu se-paranoia kunye noloyiko olusulela abantu abothuswe ziimpazamo zabo.
I-Scafaria iguqule umdlalo wesikrini ukusuka I-Hustlers kumanqaku , inqaku ngo Inew York umbhali wephephancwadi uJessica Pressler, kwaye ifilimu ithembekile kwiziganeko njengoko i-Pressler ichaza, nangona yongeza intatheli eyintsomi (uJulia Stiles) njengesixhobo sokuqulunqa. (Kwaye kukho enye into efana nayo Goodfellas kwaye Ingcuka yaseWall Street : Umlinganiswa ophambili ochaza igrift ukusuka ekukhawulweni ukuya ekuwohlokeni kwilizwi.) Hustlers ayibethi impepho idlula ubunzulu bobubi; iziqendu zokusebenzisa iziyobisi ziyathandabuza kwaye ziyaphakuzela. Kukho ubugebenga bokwenyani apha, kwaye kukho amaxhoba okwenyani apha, kwaye bendifuna ukuhlala ndinyanisekile kokwenzekileyo, utshilo uScafaria. Kodwa ifilimu ayigwebi abalinganiswa bayo kakhulu njengembono yehlabathi abathe bathenga kuyo kunye neenyaniso zemali eziqhekekileyo ekufuneka baziphathe. Hustlers ayiceli abaphulaphuli ukuba bazingcambu zabo, ngokuyimfuneko, kodwa ifuna ukuba siziqonde. Lo ngumboniso bhanyabhanya omalunga nesini njengoko uhambelana noqoqosho, kunye nendlela abasetyhini abasebenza ngayo kubungxowankulu, iScafaria iyaqhubeka. Njengo Umlingo uMike , uSteven Soderbergh's fizzy male-stripper opus, Hustlers kunokuba mnandi kakhulu kunye nokubhiyozelwa kwemidlalo yenyama. Kodwa apho uMike ephuma khona eklabhu, abafazi be Hustlers bazibhaqe bevalelekile ngokwandayo; abanasiphiwo sikhethekileyo sokwenza ifanitshala, kodwa banemilomo yokuzondla, amathuba okuba bangasebenzi kakuhle kwicandelo lokuthengisa, kunye nebala abajongene nalo ngokuthatha inxaxheba kushishino lwesikhumba.
URamona kunye ne-Destiny bathanda izinto eziphathekayo, kwaye bagqithisa iimpahla zobuncwane njenge-totems yokuzithemba, bathengelana izipho ezibiza kakhulu njengeendlela zokubonisa uthando lwabo. Akukho nto inje ngebhegi enkulu, uRamona uxelela i-Destiny emva kokuba bethenge isiqwenga esikhulu esisisidenge sikaLouis Vuitton. Kwizihlandlo ezibini, isibini sidibana ngoboya bexabiso. Ukuthanda kwabo iilebhile bakhumbula elinye iqela lolwaphulo-mthetho lwe-cinematic elizimisele ukuba kwizityebi ukuze lihlale eLouboutins. Nangaphezulu kunayo nayiphi na ifilimu ye-Scorsese okanye i-caper yakudala, Hustlers sisiqwengana somoya esisiqwenga somboniso bhanyabhanya ophantsi ka-Sofia Coppola ka-2013 Iringi yokuqahakazelayo , elandela inguqulelo entsonkothileyo encinane yeqela lemigulukudu elikwishumi elivisayo elalijolise kwizityebi nabadumileyo. ndifuna uku phanga , intombazana yase-Valley ka-Emma Watson engaziphethe kakuhle ikhala. NjengoDestiny kunye noRamona, izigebenga zaseCalifornia zithenge inkqubo yexabiso elonakalisayo apho indlela oyifumana ngayo into ibaluleke kakhulu kunento yokuba unayo.
Kuzo zombini iifilimu, abahlobo abacinga ngolwaphulo-mthetho bayenziwa ngokunyanzelisa kwabo ukuba i-bling lilungelo labo; nangona kunjalo, Hustlers inovelwano ngakumbi kwizifundo zayo, ezihlala kuluhlu lwezoqoqosho olusezantsi kakhulu kwaye luyingozi ngakumbi kunabo abancinci, abamhlophe, abatyebileyo baseCoppola.
Ngelixa Iringi yokuqahakazelayo uyabadela abakreqi bakhe abanqula udumo; Hustlers ayikwazi ukunyamezela ukuhlekisa ngabalinganiswa bayo. Naxa uRamona ekhupha umgca wakhe wokuqubha we-denim yonke, i-Swimona, ilinge eliphosakeleyo lokuhamba ngokuthe ngqo lisebenza ngokuyintloko njengobungqina bendlela ekunzima ngayo ukuba azenzele umsebenzi; incasa yakhe yobukhazikhazi sisiphawu sodidi, hayi isiphene somlinganiswa. Kwaye ngelixa uninzi lwe Iringi yokuqahakazelayo Abaphangi be-narcissistic ngabahlobo abazicingelayo abaluncedo-u-Israel Broussard's Marc nguye yedwa, onqwenela ngokwenene abahlobo-abafazi Hustlers banyamekelane ngokwenene, phezu kwako nje konke okwenzekayo phakathi kwabo kunye neziphene zabo.
Hustlers yenzeka kutsha nje, kwaye yifilim efika kanye ngexesha elifanelekileyo. Ibiyi Ixesha leGrifter ngokuba, ngandlela ithile, iminyaka. Abantu abanakufumana amabali aneleyo malunga namagcisa, ukusuka kwi-Fyre Festival's fratty villain uBilly McFarland, umxholo wamaxwebhu amabini akhutshwe ngaxeshanye, ukuya ku-Theranos's Elizabeth Holmes, owayesele engumxholo we-HBO documentary emva kokuba eqhathe oogqirha, izigulane, kunye nabatyali-mali kulo lonke elaseMelika. ngokwenza ngathi uqulunqa inkqubo yovavanyo lwegazi engcono, kwaye ngubani ekunokwenzeka ukuba afumane ingqwalasela ethe chatha xa esiya ematyaleni ngo-2020. Isibuko seQhinga , Umbhali uJia Tolentino ubiza ingxaki yezemali ka-2008 ukuba isiganeko esiye saqalisa ukuqonda kwexesha leminyaka eliwaka ukuba eyona ndlela ikhawulezayo yokuphumelela kukuqhatha. Hustlers kumanqaku kwakhona; ngo-2018, wabhala ebambe ngokulinganayo ibali malunga no-Anna Delvey, i-heiress yaseRashiya yobuxoki eyabamba indlela yayo kwindawo yobugcisa ephakathi kwedolophu kwaye yaphelela entolongweni. (uShonda Rhimes uyabhala uthotho ngokusekwe kwiakhawunti yePressler yeNetflix.) Kule veki, i isincoko ukusuka kowasetyhini owayesebenzisa ii-captions ze-ghostwrite kwi-influencer edumileyo ye-Instagram yaba sisihloko esingaphephekiyo ngokufutshane kwiintlobo zeendaba-uphawu olukhathazayo lokuba, ngeli xesha, nobuqhetseba obukruqulayo bunokuhamba ngentsholongwane.
Kulo moya ubhudlayo Hustlers , hayi kakhulu ukubhiyozela isethi yabo yabarhwebi kodwa besala ukubagweba, imuvi yolwaphulo-mthetho ifanelekile okwangoku.
lou reed kunye nico
nba isikhundla sokubeka amandla
Taylor Swift ingoma entsha intsingiselo
Eyona midlalo bhanyabhanya yabantu abadala ye2016
Imovie entsha yokwenyani
troy aikman vs ukutsiba ngaphandle kwebala